Oromo Free Speech: NAFXANYICHI WAYYAANEE BURKAANA IRRA TAA’EE DHAADATAA?
Taammanaa Bitimaa irraa | February 17, 2015
Maarree, erga dhiibamnee, erga ijuma teenya duratti uummanni keenya araddaa fi qeyee isaa irraa buqqifamuun itti-fufee, akka nama tokkootti waltahuun oljechuu malee, filmaata biraa tokkollee hin qabnu. Jarri kun, ee warri nafxanyoota haaraa kun tokkom-tokkoon gara nafxanyoota moofaa saniitti of-jijjiiraa jiru. Mee as irratti waan tokko! Muummichi warra Dargii, kan Mangistuu Hayila-Maaraam jedhamu bar tokko, ee oggaa warri Wayyaanee kun qabasaawota turan, tuffii uummata Tigraay irraa qabuun kan ka’e: “wanni nuti Tigraay irraa argannu chookii tokkichallee nuuf bituu hin dandayu” jechuun, uummata Tigraay kabajamaa san isa eeboon madeesse caala arraba isaa addaggee (baalagee) sanaan madeesse. Kun jiraa nama Tigraay dhiisii du’aan isaatuu akka waltahuun qabsaawu isa taasise. Nama Tigraay dhiisitii nutuu akka namummaaf jenneetoo namummaan isaan mararfannu, isaan gargaaru nu taasise. Ammas addaggummaa fi sanyummaan “waddii” Abbaay Tsahaayee kun jiraa Oromoo dhiisitii du’aan isaatuu, akka mootummaa isaa kanatti ka’uun ofirraa gombisu gochaa jira. Dureewwan warra Wayyaanee kanaaf waayeen: aadaa Oromoo, lafa Oromoo, tolcha Oromoo, odaa fi caffee Oromoo, awwaala fi galma Oromoo faa tokkoyyuu hin galleef jechaa dha. Oromoof lafnii fi lafeengadameessa tokko keessaa akka bayan, lafa isaa qabachuun lafee isaa caccabsanii nyaachuu akka tahe ganaa hin galleef jechaa dha. Kun nafxanyoota Amaaratii galuuf waggaalee 80 isaan irraa fudhate. Kaan isaanitiif garuu, ammumallee homaa hin galleefi. Nafxanyoonni Tigraayiif kun akka isaanii galuuf waggaalee 80 isaan barbaachisa moo maal dubbiin? Garuu, dhaloonni harraa kun, keessumaa Dhaloonni Qubee kun burkaanni (“volcano“) Oromoo akka daddafeetoo dhowu taasisa.
Seerri biyyoota addunyaas, seerri Mootummoota Waltayaniis (UNO) saba qawween biyyi isaa qabame, akka qawweenis of-bilisoomsu ni gargaara. Maal dureen uummata Falastiinaa, Yaasir Arafaat shugguxii hidhatee walgayii UNO irratti argamee mitii? Kanan kana kaaseef, Oromoota tokko tokko kanneen: “addunyaan geeddaramte“, “barri bara globalization” faa jechuun impaayarittii Toopphiyaa tana nuuf suppuu fi nu irratti supphuuf yaalaniifi. Uummanni Oromoo inni qawween cabee dhiddhiitamaa jiru kun karaa nagaas, karaa kaanis bilisummaa fi walabummaa ofiitiif qabasaawuun namaanis, Waaqaanis kan deeggaramu; kan eebbifamu. Kanaaf, ee kanaaf uummanni Oromoo guddichi kun, gaaraa-dakaa, alaa-manaa ijaaramee, tokkoomee, walitti-qindoomee, karaa maraan hidhatee mirgaa fi haqa uumaan qabuuf tarkaanfachuu qaba. Jaarmoleen Oromoo marti, dhiiraa-dubartiin Oromoo marti waltahuun oljechuutu isaanis, biyya isaanii boontuu tanas kan baasu taha. Waladaaleen amntiiwwanii kan: Muslimootaas, kan Kiristaanotas, kan Waaqeffatootaas uummanni Oromoo akkabirmadoomuuf, sabni Oromoo akka bilisoomuuf, Biyya Oromoo, Oromiyaan akka walaboomtuuf WAAQA kadhachuufii qabu! “Nama Waaqni bilisa taasisee uume, eenyumtuu akka isa gabroomfachuu hin qabne“, lallabuun, barsiisuun hojii isaanii keessaa isa hangafa!
Posted by admin - 17/02/2015 at 9:41 am
2 Responses to “NAFXANYICHI WAYYAANEE BURKAANA IRRA TAA’EE DHAADATAA?”
“Waan facaafatan hamatan” jedha Oromoon yoo mammaaku.
Wayyaaneen maaliif nu tuffachuu dandeesse?
Yoo gaafii kanaaf deebii quubsaa deebisuu dandeenye tuffiin Wayyaanee kun ni dhaabbata. Yoo nuti deebii quubsaa deebisuu hanqanne garuu, tuffiin kana caalullee ni dhufa. Dhugaa kana hubachuun, waan hunda caalaa barbaachisaa dha. Tuffii jalaa bayuuf, humna diina caalu horachuun dirqama ta’a. Dallansuu yaroo gabaabduuf nu keessaa iyyitu bira dabrinee (kunnee) humni Oromoo humna diinaa akka ijaaramuu, ijaaramuu, ijaaramu irratti xiyyeeffachuu qabna. Malli (falli) tuffii diinaa jalaa nu baasu sana qofa. Ammas hin irraanfatinaa: “Waan facaafatan hamatan” jedha Oromoon yoo mammaaku.